Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Lymphatic filariasis ဆင်ခြေထောက် (အဆက်)
Lymphatic filariasis ဆင်ခြေထောက် (အဆက်)
Facebook2hours ago, 13-9-2013
ဆရာရှင့် ယခုတိုက်ကျွေးနေသော ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို နို့တိုက်မိခင်တွေ သောက်လို့ ရပါသလားရှင့်။ ကျွန်မသားလေးက တစ်နှစ်ငါးလရှိပါပြီရှင့်။ ညဘက်မှာ နို့တိုက်နေရဆဲမို့ မေးတာပါရှင့်။
Lymphatic filariasis (WHO Updated March 2013)
ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၇၃ နိုင်ငံမှာ ၁့၎ ဘီလျန်ဒီရောဂါရှိနေတယ်။ သန်း ၁၂ဝ မှာ ပိုးရှိနေပြီး၊ သန်း ၄ဝမှာ ခြေထောက်တွေ ကြီးနေကြတယ်။ ယောက်ျား ၂၅ သန်းမှာ ကျားလိင်အင်္ဂပါ ရောဂါကြောင့်ကြီးနေကြတယ်။ ၁၅ သန်းက ခြေထောက်ပါ ကြီးနေတယ်။ ကူးစက်မှုမဖြစ်အောင် WHO ကနေ ဆေး ၂ မျိုးတွဲကို တကြိမ်တည်းတိုက်ကြွေးပေးနေတယ်။
Filariodidea အုပ်စုဝင် Nematodes (Roundworms) သန်ကောင်ကနေ ဖြစ်စေတယ်။ (၃) မျိုးရှိတယ်။
1. Wuchereria bancrofti 90% of the cases
3. B. timori
Lymphatic system သွေးပြန်ရည်စနစ်ကိုထိခိုက်ပြီး လမ်းကြောင်းပိတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်တာ၊ ကြီးတာတွေ ဆက်ဖြစ်တယ်။ Culex mosquito ခြင်အမျိုးအစားကနေ လူတယောက်ဆီကနေ နောက်တယောက်ဆီကူးစက်စေတယ်။
ရက်တိုနဲ့ နာတာရှည် ၂ မျိုးဖြစ်တယ်။ အများစုမှာ ဘာမှမခံစားရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သွေးပြန်ရည်စနစ်နဲ့ ကျောက်ကပ်၊ ခုခံအားစနစ်တို့ကို ထိခိုက်နေလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကာစမှာ တက်စေ့တွေရောင်မယ်။ နာတာရှည်ဖြစ်မှ Lymphoedema ရောင်တာတွေဆက်ဖြစ်တယ်။ ခြေထောက်မှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား ကပ်ပဲ့အိပ်၊ အမျိုးသမီးရင်သား၊ မိန်းမအင်္ဂါတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Mass drug administration (MDA) လူအများစုကိုဆေးပေးနည်းနဲ့ ကာကွယ်ရေးလုပ်ပါတယ်။
• Albendazole (400 mg) + Diethylcarbamazine citrate (DEC) (6 mg/kg) တခြားဒေသတွေမှာ ပေးတယ်။
• Albendazole (400 mg) + Ivermectin (150-200 mcg/kg) ဆေးအတွဲကို Onchocerciasis (River blindness) ရောဂါ ထူပြောရာဒေသတွေမှာ ပေးတယ်။
Mosquito control ခြင်နှိမ်နင်းရေးလဲလုပ်ရမယ်။ MDA နည်းဗျူဟာကို ၄-၆ နှစ်ကြာလုပ်မယ်။
Albendazole ရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
Albendazole ရဲ့ ဆေးပညာရှင်တွေသာ သိဘို့လိုတဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ သတိနဲ့ပေးရမယ်။ အထဲကကလေးကိုထိုခိုက်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး သောက်နေချိန်မှာ တားနည်းကို အားနည်းစေလို့ တားနည်း ၂ မျိုးတွဲ ဥပမာ (ကွန်ဒွမ်) + တားဆေးတွဲသုံးသင့်တယ်။ Albendazole ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် အဲလိုတလသုံးပါ။ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ ဆေးက နို့ရည်ထဲရောက်-မရောက်ဆိုတာ ပြောဘို့ မသေချာပါ။
Diethylcarbamazine ရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
ယား၊ မျက်နှာ (မျက်လုံး) ရောင်၊ ကိုယ်ပူ၊ ညနေခင်းမျက်စိကြည့်မကောင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ အဆစ်နာ၊ မောပန်း၊ ခေါင်းမူး၊ ပျို့-အန်။ တကယ်လို့ မျက်စိကြည့်မကောင်းတာ၊ ည-ညနေပိုင်းကောင်းကောင်းမမြင်ရတာနဲ့ လှိုင်ခေါင်းထဲကနေ ကြည့်ရသလို မြင်လာရတာရှိရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် ထူးခြားပြီးဖေါ်ပြထားတာ မရှိပါ။